Wondershare MobileTrans User Guide - Symbian ka iOS
MobileTrans Guide: Symbian ka iOS
Nzọụkwụ 2. Pịa "na ekwentị ekwentị Nyefee" ke akpan window n'elu.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ ma gị Symbian na ngwaọrụ ma iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na iji USB cables. Gbaa mbọ hụ na MobileTrans ghotara ma ngwaọrụ.
Buru n'uche na anyị na-ebufe data gị Symbian ngwaọrụ iOS. Ọ bụrụ na iji nke isi iyi na ebe ngwaọrụ a nwesịrị, pịa "tụgharịa" idozi ya.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ị ga-achọ nyefee site n'inyocha igbe esote onye ọ bụla faịlụ ụdị. Ị nwekwara ike ịhọrọ iji kpochapụ ihe data na njedebe gị ekwentị tupu ebufe ọ bụla data. Dị nnọọ ego na "Doro Anya data tupu oyiri" Ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị chọrọ ime.
Nzọụkwụ 5. Pịa na "Malite oyiri" na-amalite nyefe usoro. Na-na ngwaọrụ gị jikọọ kọmputa gị dum usoro.
Ọzọ: Android ka WinPhone